Magaalota Wallagga Bahaafi Horroo Guduruutti hiriirri ajjeechaa lammilee mormuun kalleessa gaggeffame - BBC News Afaan Oromoo
Jiraattonni magaalota Godina Wallaga Bahaafi Horroo Guduruu Wallaggaa hiriira ba'uun ajjeechaa uummata lammiileerra gahaa jiru akka dhaabatu gaafachaa oolan.
Ajjechaan raawwatamaa jiruun uummanni nagaa dhabeera kan jedhan jiraattonni magalaaa gara garaatti bahan kunneen qaama hawwaasaa hunda kan hammate yommuu ta'u hojjetoota mootummaallee waajira cufanii hiriira kana akka ba'an jiraatan magaalaa Naqamtee dubbateera.
Daangaa Beenishaangul Gumuzitti 'kaleessa qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’
Jiraataan magaala Naqamtee BBC'n haasofsiise wayita ajjeechaan raawwatamutti mootummaan gahee isaa hin bahanne, uummannis nagaa dhabeera jechuun jiraatoonni hiriira bahu isaanii himeera.
Jiraataan magaalaa Naqamtee inni biraan immoo "Olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru, uummanni ajjeefamaafi buqqa'aa jira kanaaf hiriira baannera," jechuun hime.
Miseensi poolisii magaala Shaambutii yaada isaanii BBC'f kennan mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa, rakkoo nageenyaafi ajjeechaa tibbanna raawwatamaa ture callisanii ilaalaa turan jedhan.
Magaalota kunneen keessatti guyyaa har'aa sochiin daldalaa kan hin jirreefi dhaabbileen daldalaas cufamanii akka jiran jiraatootni dubbatu.
Rakkoo nageenyaa naannoo daangaatti uummameen miseensotni poolisii Oromiyaa digdamatti siiqan ajjeefamuu isaanii, hogganaan dhimmoota komunikeeshinii komishinii poolisii Oromiyaa Komishinar Soorii Dinqaa BBC'ti himuun isaanii ni yaadatama.
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa eeyyama TPLF haqe
18 Amajjii 2021
Naannoo Tigraayitti namni hedduun 'beelaan dhumuu mala'
Gumaa, sirna namni lubbuu baase namaa fi Waaqa ittiin araarfatu
Museveenif aangoon ganna 35 maaliif gahaa hin taane?
10 Amajjii 2021
Gaheen miseensota Bordii Filannoo Itoophiyaa maaliidha?
Hakimaa tokkitti qofaa hospitaala Covid-19n weerarame keessa turte
Namichaa sodaa koronaavaayirasiin ‘ji’a sadiif buufata xiyyaaraa keessa ture’
Mormitoonni hidhatan magaalota US keessatti walitti qabamuu eegalan
Walitti bu'iinsa Sudaan, Daarfur keessatti mudateen namoonni 80 caalan du'an
Kaampaaniiwwan teeknoloojii gurguddoon akkamiin Tiraampiin callisiisan
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa biiroolee filannoo banuuf deeggarsa naannoolee gaafate